[ , ] Kugadziriswa kweAlgorithmic kwaiva dambudziko neGoogle Flu Trends. Verenga pepa Lazer et al. (2014) , uye nyora tsamba shoma, yakajeka kune injineri paGoogle kutsanangura dambudziko uye kupa pfungwa yekugadzirisa nayo.
[ ] Bollen, Mao, and Zeng (2011) vanoti data kubva kuIndaneti inogona kushandiswa kufanotaura mumusika wekutengesa. Izvi zvakakonzera kusikwa kwehedge fund-Derwent Capital Markets-kuisa mari mumusika wekutengesa zvichienderana nemashoko akaunganidzwa kubva ku Twitter (Jordan 2010) . Uchapupu hupi hwaungada kuona usati waisa mari yako muhomwe iyoyo?
[ ] Kunyange zvazvo vamwe vatsigiri vehutano vese vanofunga nezve e-cigarettes rubatsiro runobatsira pakurega kusvuta, vamwe vanonyevera nezvengozi dzinogona kuitika, dzakadai sedzakakwirira yeicicin. Fungidzira kuti muongorori anofunga kuongorora maonero evanhu kune e-cigaretti nekuunganidza e-cigarettes-yakabatana nepepanhau dze Twitter uye kuita manzwiro ekuongorora.
Ndezvipi zvitatu zvinogona kuitika iwe unonyanya kunetseka pamusoro penyaya ino?
Clark et al. (2016) yakakwanisa kudzidza zvakadaro. Chokutanga, vakaunganidza tweets 850 000 iyo yakashandisa e-cigaret-keywords kubva kuJanuary 2012 kusvika munaDecember 2014. Pavakanyatsoongorora, vakaona kuti dzakawanda zve tweets idzi dzaiongororwa (kureva,, kwete dzevanhu mabhizimisi. Vakagadzira kushandiswa kwevanhu kushandiswa kwemashoko ekuparadzanisa ma tweets kubva kuneti tweets. Kushandisa munhu uyu kuona hutori hwegoridhe vakawana kuti makumi mapfumbamwe ema tweets aiva automated. Izvi zvinoshandura mhinduro yako kune chikamu (a) here?
Apo vakafananidza manzwiro ezvinyorwa uye mawoti ma tweets, vakaona kuti ma tweets akazvinyorwa akanga akanaka pane zvinyorwa zvehupenyu (6.17 kusvika 5.84). Izvi zvinoshandura mhinduro yako kune (b) here?
[ ] MunaNovember 2009, Twitter yakashandura mubvunzo mubhodhi reTweet kubva kune "Uri kuitei?" Kune "Chii chiri kuitika?" (Https://blog.twitter.com/2009/whats-happening).
Iwe unofunga kuti kuchinja kwekukurumidza kunobatsira sei ma tweets uye / kana kuti chii ivo tweet?
Zita rimwe chiitiko chekutsvakurudza chaunosarudza kukurumidza "Uri kuitei?" Tsanangura chikonzero nei.
Zita rimwe chiitiko chekutsvakurudza chaunosarudza kukurumidza "Chii chiri kuitika?" Tsanangura chikonzero nei.
[ ] "Retweets" dzinowanzoshandiswa kuyera simba uye kupararira kwemasimba pa Twitter. Pakutanga, vashandisi vaifanira kunyora uye kuisa tweet yavakada, tora munyori wepakutanga nemabatiro ake, uye shandisa manyore "RT" tisati tweet tati kuratidza kuti yaiva retweet. Zvadaro, muna 2009, Twitter yakawedzera "retweet" button. Muna June 2016, Twitter yakaita kuti zvive nyore kuti vashandisi vadzokerezve ma tweets avo (https://twitter.com/twitter/status/742749353689780224). Iwe unofunga kuti kuchinja uku kunofanira kukanganisa sei iwe unoshandisa "repute" mune tsvakurudzo yako? Sei kana kuti kwete?
[ , , , ] Mune pepanhau rakakurukurwa, Michel nevanoshanda navo (2011) vakaongorora zvinyorwa zvemabhuku anopfuura mamiriyoni mashanu akaedza kuongorora maitiro emitambo kwenguva refu. Dhiyabhorosi yavakashandisa iko zvino yakasunungurwa se dataset yeGoogle NGrams, uye saka tinokwanisa kushandisa deta kuti tinyatsotarisa nekuwedzera mamwe mabasa avo.
Mune chimwe chezvizhinji zvinoguma mupepa, Michel nevanoshanda navo vakatsigira kuti tiri kukanganwa nekukurumidza nekukurumidza. Kwegore rimwe chete, ichiti "1883," vakaverenga chikamu che 1-gramu chakabudiswa mugore roga roga pakati pe 1875 na1975 iyo yaiva "1883". Vakafunga kuti chiyero ichi chiyero chekufarira mune zvakaitika zvakaitika mugore iroro. Mumufananidzo wavo 3a, vakagadzirira kushandiswa kwemashandisirwo kwemakore matatu: 1883, 1910, uye 1950. Makore matatu aya anogovera muenzaniso wakafanana: kushandiswa zvishoma gore iroro risati rasvika, ipapo tsvina, iyo yakaora. Zvadaro, kuenzanisa muyero wekuora kwegore negore, Michel nevakashanda navo vakaverenga "hafu yeupenyu" yegore negore kwemakore ose pakati pe1875 ne1975. Mumufananidzo wavo 3a (inset), vakaratidza kuti hafu yeupenyu hweumwe neumwe gore rava kuderera, uye vakakavhiringidza kuti izvi zvinoreva kuti tiri kukanganwa zvakapfuura nekukurumidza. Vakashandisa Version 1 yemutauro weChirungu corpus, asi gare gare Google yakabudisa shanduro yechipiri ye corpus. Ndapota verenga nhengo dzose dzomubvunzo usati watanga kunyora coding.
Ichi chiitiko chichakupa iwe kudzidzira kunyora zvinyorwa zvinodzokorora, kutsanangura mhinduro, uye dhigirii kukanganiswa (sekushanda nemaefisi asina kukodzera uye kushandisa demo iripo). Ichi chiitiko chichakubatsirawo kumuka uye kumhanya neine dataset yakafuma uye inofadza.
Tora data yakajeka kubva paGoogle Books NGram Viewer webusaiti. Kunyanya, iwe unofanira kushandisa shanduro yechipiri yeChirungu corpus, yakabudiswa musi waJuly 1, 2012. Isinganzwisisiki, iyi faira iri 1.4GB.
Kudzokorora chikamu chikuru chechimiro 3a Michel et al. (2011) . Kuti udzorezve chiyero ichi, iwe unoda mahwendefa maviri: iyo iwe waunowanikwa mune chikamu (a) uye "chiverengero che" faira, iyo yaungashandisa kushandura zviyero zvakasvibira pakuenzana. Cherechedza kuti nhamba yose yefaira ine chimiro chingaita kuti zvive zvakaoma kuverenga mukati. Ipiji 2 ye data yeKamram inobereka migumisiro yakafanana kune inowanikwa Michel et al. (2011) , iyo inowanikwa mundima 1 data?
Iye zvino tarisai girafu yako kurwisana negrafu yakagadzirwa ne NGram Viewer.
Kudzokorora chiyero 3a (chimiro chikuru), asi shandura \_(y\_) -axis kuti ive yakasvikanwa kutaurwa kuverenga (kwete muyero wekutaura).
Ko musiyano uri pakati (b) uye (d) unokutungamirira kuti uongororore chero mimwe yemigumisiro yaMichel et al. (2011). Sei kana kuti kwete?
Iye zvino, uchishandisa chikamu chekutaura, chengetedza zvinyorwa zvemufananidzo 3a. Izvi zvinoreva, gore negore pakati pe1875 ne1975, kuverenga hafu yeupenyu hwegore iroro. Iyo hafu-hupenyu inotsanangurwa kuti ndiyo nhamba yemakore inopfuurira musati mazana ezvokutaura anosvika hafu yepamusoro yepamusoro. Cherechedza kuti Michel et al. (2011) kuita chimwe chinhu chakaoma kunzwisisa kuti hafu-hupenyu-ona chikamu III.6 cheMushandiro Wekuchengetedzwa KwepaIndaneti-asi vanoti nzira mbiri idzi dzinobereka zvibereko zvakafanana. Nhamba yepiri ye data yeKamram inobereka zvibereko zvakafanana kune izvo zvinowanikwa Michel et al. (2011) , iyo inowanikwa mundima 1 data? (Zano: Usashamisika kana risingaiti.)
Paiva nemakore akawanda aive akadai semakore akanganikwa zvakanyanya nokukurumidza kana kunyanya zvishoma nezvishoma here? Bvunzurudza muchidimbu nezvezvikonzero zvinogona kuitika zvemufananidzo iwoyo uye tsanangai maitiro awakaratidza mazviri.
Iye zvino taurazve chigumisiro chechikamu chechipiri che data yeKngrams muchiChina, ChiFrench, ChiGerman, ChiHebheru, ChiItaly, ChiRussia neSpanish.
Kuenzanisa pamitauro yose, kwaivepo makore ose akanga ari kunze, zvakadai semakore akanganwika kunyanya kana kunyanya zvishoma nezvishoma? Dzokorora muchidimbu pamusoro pezvikonzero zvinogona kuitika payo.
[ , , , ] Penney (2016) akatsvaga kana kuparadzirwa kwakawanda pamusoro peNSA / PRISM kuongororwa (kureva, kuzarurirwa kweWrdenden) muna June 2013 kwakabatana nekuderera uye kwakangoerekana kwaderera mumugwagwa ku Wikipedia nyaya pamusoro pehurukuro dzinosimudza zvinetso zvevamwe. Kana zvakadaro, kuchinja uku mune mufambiro kunenge kuchienderana nekukanganisa kunokonzerwa nekuonekwa kwehukuru. Nzira Penney (2016) dzimwe nguva inonzi inoparadzaniswa nguva yakagadzirirwa yakagadzirirwa, uye inofananidzwa nemigwagwa inotsanangurwa muchikamu 2.4.3.
Kuti usarudze musoro wemashoko ekuti, Penney anotaurwa kune rumwe ruzha rwakashandiswa neDhipatimendi rekuUnited States reUnited States nekutsvaga nekuongorora zvekugarisana kwevanhu. DHS rondedzero inotsanangura mamwe mazwi ekutsvaga mumibvunzo yakasiyana-siyana, kureva, "Utano Hwenhamo," "Infrastructure Security," uye "Ugandanga." Kune boka rekudzidza, Penney akashandisa 48 keywords ane chokuita ne "Ugandanga" (ona appendix table 8 ). Akabva aita sangano re Wikipedia maonero anoverengwa pamwedzi we 48 Wikipedia zvinyorwa pamwedzi wemwedzi 32, kubva pakutanga kwaJanuary 2012 kusvikira pakupera kwaAugust 2014. Kuti asimbise nharo yake, akaumbawo mapoka akawanda ekuenzanisa nekutevera nyaya inotarisa pane dzimwe nyaya.
Iye zvino, iwe uchataurazve uye wedzera Penney (2016) . Zvose zvakashata zvaunoda zvemuitiro uyu zvinowanikwa kubva ku Wikipedia. Kana iwe unogona kuitora kubva kuR-package wikipediatrend (Meissner and R Core Team 2016) . Paunonyora mhinduro dzako, tapota ona chinyorwa chekushandisa chawakashandisa. (Cherechedza kuti basa rimwechete rinowanikwawo muchitsauko 6.) Ichi chiitiko chichakupa iwe kudzidzira mumatare kukwikwidzana nekufunga nezvekuedza kwezvisikwa mumadhaka makuru ezvinyorwa. Izvo zvichaitawo kuti iwe upinde uye unomhanya nechinangwa chekufadzwa kwemashoko emangwana emangwana.
Verengai Penney (2016) uye mutsanangurire mufananidzo wake 2 unoratidza peji maonero e "Ugandanga" -kubatanidzwa mapeji asati apfuura uye mushure mekuzarurwa kweWaldenden. Tsanangura zvinowanikwa.
Zvadaro, nyora chidzidzo cheAAA, chinofananidza boka rekudzidza ("Ugandanga" -kukurukurwa nenyaya) neboka rekuenzanisa rinoshandisa mazwi ezvinyorwa pasi pe "DHS & Other Agencies" kubva kuDHS runyorwa (ona appendix table 10 uye mashoko 139). Tsanangura zvinowanikwa.
Muchikamu (b) iwe wakaenzanisa boka rekudzidza neboka rimwe rekuenzanisa. Penney akafananidza nevamwe vaviri maenzanisi maviri: "Infrastructure Security" Related articles (appendikisi table 11) uye Wikipedia mazita anozivikanwa (appendix table 12). Uyai neimwe sangano rekuenzanisa, uye edzai kana zvakawanikwa kubva kune chikamu (b) zvakanyatsoenderana nesarudzo yako yeboka rekuenzanisa. Iro sarudzo ipi inogadzirisa pfungwa? Sei?
Penney akataura kuti keywords inotaura nezve "Terrorism" yakashandiswa kusarudza Wikipedia zvinyorwa nokuti hurumende yeUnited States inotaura nezvehugandanga sechinhu chakakosha chekutsvaga kwaro mumatambo. Sekutarisa kwemashoko aya 48 "Ugandanga" -kubatanidzwa mazwi makuru, Penney (2016) akaitawo ongororo paT MTUK, achikumbira vaverengi kuti vaenzanise imwe neimwe yeH keywords maererano neHurumende Dambudziko, Kuzvimirira-Kunzwa, uye Kudzivisa (Appendix table 7 ne8 ). Dzokorora tsvakurudzo paT MTUK uye oenzanisa nemigumisiro yako.
Kubva pane zvabuda mune chikamu (d) uye kuverenga kwako nyaya yacho, unobvumirana naPenney's sarudzo yehurukuro dzemashoko muboka rekudzidza? Sei kana kuti kwete? Kana zvisina kudaro, iwe ungati chii pane kudaro?
[ ] Efrati (2016) yakashuma, zvichibva pamashoko akavanzika, kuti "kugoverana zvachose" pa Facebook kwakanga kwaderera ne55% gore pagore apo "kugoverana kwepakutanga kwekuparadzira" kwaive pasi 21% gore negore. Izvi zvakakonzerwa zvikuru nevanoshandisa Facebook vasati vava nemakore makumi matatu. Mharidzo iyi inotaura kuti kuderera kwezvinhu zviviri. Imwe ndiyo kukura kwehuwandu hwe "shamwari" vanhu vane Facebook. Chimwe chacho ndechokuti vamwe kugoverana basa kwakashandura kumishumo uye kumakwikwi akadai seSpapchat. Mharidzo iyi yakaratidzawo maitiro akasiyana-siyana Facebook akaedza kuwedzera kugoverana, kusanganisira News Feed zvigadzirisiti tweaks zvinogadzira zvinyorwa zvepakutanga zvakakurumbira, uyewo zviyeuchidzo zvenguva pfupi yezvigadzirwa zvepakutanga ne "On This Day". Zvinorevei, kana zvakadaro, kuita izvi zvakagadziriswa kune vatsvakurudzi vanoda kushandisa Facebook sechinhu chekushandisa?
[ ] Ndeupi musiyano pakati pezvenyanzvi dzevanhu uye munyori wenhau dzakaitika? Maererano neGoldthorpe (1991) , musiyano mukuru unotarisira kudarika deta. Vanyori vezvakaitika kare vanomanikidzwa kushandisa relics, asi nyanzvi dzezvemagariro evanhu dzinogona kugadzirisa deta yavo yekuunganidza pane zvinangwa. Verenga Goldthorpe (1991) . Misiyano yakadini pakati pezvematongerwo enyika uye nhoroondo yakabatana nemafungiro ekuchengetedzwa kwevatongi uye vakagadzirira?
[ ] Izvi zvinowedzera pamibvunzo yakapfuura. Goldthorpe (1991) yakatora mhinduro dzakawanda dzinoshorwa, kusanganisira imwe kubva kuna Nicky Hart (1994) iyo yakaidza kuzvipira kwaGoldthorpe pakuita zvakagadziridzwa. Kuti ajekese zvingave zvisingakwanisi kuitwa nedzimwe nhepfenyuro, Hart yakatsanangura Affluent Worker Project, tsvakurudzo yakawanda kuti ione ukama huri pakati pevanhu vemukirasi uye kuvhota iyo yakaitwa naGoldthorpe nevamwe vainenge pakati pemakore ekuma1960. Sezvo munhu angatarisira kubva kune imwe nyanzvi yakada deta yakagadziriswa pamusoro pekuwana deta, Affluent Worker Project yakagamuchira data yakagadzirirwa kutarisana nechangobva kutsanangurwa mazano pamusoro pezveramangwana evanhu vevanhu munguva yekuwedzera hupenyu hwehupenyu. Asi, Goldthorpe nevamwe vashandi pamwe chete "vakakanganwa" kuunganidza ruzivo pamusoro pekuita kwekuvhota kwevakadzi. Hezvino Nicky Hart (1994) akafupikisa chiitiko chose:
"... izvi [zvakaoma] kudzivisa kugumisa kuti vakadzi vakasiyiwa nokuti izvi 'zvakagadzirwa' dataset zvaive zvakagadziriswa nepfungwa yeparadigmatic iyo isina kubvisa chiitiko chevakadzi. Inotungamirirwa nepfungwa yechinyorwa yekirasi yekuziva uye chiito sehutungamiri hwemurume ..., Goldthorpe nevamwe vake vakavaka zvikamu zvehupupuriro zvehupi izvo zvakadyisa uye zvakasimudzira mafungiro avo pachavo pane kuisa pachena kuvheti yakakodzera yekukodzera. "
"Zvakawanikwa zvinyorwa zveAffluent Worker Project zvinotitaurira zvakawanda pamusoro pehutsika hwemasculinist hwepakati pezana remakore remakore pane hutanozivisa hutano hwekugadzirisa, zvematongerwe enyika uye hupenyu hwehupenyu."
Unogona here kufunga nezvemamwe mienzaniso apo zvakagadziriswa deta yekuunganidza zvakagadzirisa zve data data vatori vakavakwa mairi? Izvi zvinofananidzwa sei nekugadziriswa kwegadziriro? Izvi zvingave zvinorevei kune apo vatsvakurudzi vanofanira kushandisa prammades uye pavanenge vachifanira kushandisa zvidziviriro?
[ ] Muchitsauko chino, ndakatarisa mashoko akaunganidzwa nevatsvakurudzi vevanotsvakurudza vane zvinyorwa zvekutungamirira zvakagadzirwa nemakambani nehurumende. Vamwe vanhu vanodana idzi zvinyorwa zvekutarisira "vakawana data," iyo inopesana ne "yakagadzirirwa data." Ichokwadi kuti zvinyorwa zvekutungamirira zvinowanikwa nevatsvakurudzi, asi zvakare zvakagadzirirwa. Semuenzaniso, makambani emazuva ano anoshanda nesimba zvakaoma kuti aunganidze uye anyorese data yavo. Nokudaro, zvinyorwa izvi zvekutungamirira zvose zvakawanikwa uye zvakagadzirirwa, zvinongobva pane maonero ako (mufananidzo 2.12).
Mufananidzo 2.12: Mifananidzo yacho yose ibhasi nembira; izvo zvaunoona zvichienderana nemafungiro ako. Dhiyabhorosi dhiyabhorosi inowanikwa yakawanikwa uye yakagadzirwa; zvakare, izvo zvaunoona zvichienderana nemafungiro ako. Semuenzaniso, nhepfenyuro yedheferensi yekuunganidza iyo yakaunganidzwa nekambani yefoni-foni inowanikwa data kubva pakuona kwomutsvakurudzi. Asi, izvi zvakanyora zvinyorwa zvakagadzirirwa deta kubva pane imwe nzira yeumwe munhu ari kushanda munharaunda yekubhadhara yekambani yefoni. Mhedziso: Popular Science Monthly (1899) / Wikimedia Commons .
Ipa muenzaniso wekutsvaga deta uko kuona iyo yese yakawanikwa uye yakagadzirwa inobatsira paunoshandisa iyo dhiyabhorosi nzvimbo yekutsvakurudza.
[ ] Munyaya inofungidzirwa, Christian Sandvig naEzzter Hargittai (2015) vakapatsanura kutsvakurudza kwedhigiri muzvikamu zviviri zvakaperera zvichienderana nekuti digital system isiri "chiridzwa" kana "chinhu chekudzidza." Muenzaniso werudzi rwekutanga-iyo nzira chigadzirwa-inotsvakurudzwa naBangtsson uye vashandi pamwe chete navo (2011) pakushandisa nhare dzefoni-foni kuti vafunge kubuda kune mushure mekudengenyeka kwenyika muHaiti muna 2010. Muenzaniso wechipiri rwechipiri-iyo sangano chinhu chinongororwa-inotsvakurudzwa naJensen (2007) pamusoro pekuti kuiswa kwefoni dzese kuKerala, India kwakakanganisa sei kushanda kwemusika wehove. Ndinowana kusiyana uku kunobatsira nokuti inotsanangura kuti zvidzidzo zvinoshandiswa kushandisa dhiyabhorosi zvinyorwa zvinogona kuva nezvinangwa zvakasiyana-siyana kunyange kana dziri kushandisa rudzi rumwechete rwezvinyorwa. Kuti urambe uchijekesa izvi zvakasiyana, tsanangudzo zvidzidzo zvina zvawaona: zviviri zvinoshandisa dhidhiyo sechiridzwa uye maviri anoshandisa dhidhijiti sechinhu chokudzidza. Unogona kushandisa mienzaniso kubva muchitsauko ichi kana iwe uchida.